Apple inoganhurira mamwe emojis uye mazwi mune akanyorwa zvakaenzanirana neAirTag | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | | Noticias, Apple zvigadzirwa
Mharidzo ye nuevos productos y servicios Apple yeGore yaive nezuro uye yaitepfenyurwa ichirarama kuburikidza nehurukuro yakanyorwa paApple Park. Imwe yezvakakurumbira nyeredzi zvigadzirwa hapana mubvunzo kuti AirTag, iwo ma locator ma tag anoenderana ne Tsvaga network. Nemidziyo midiki iyi isu tichachengeta zvese zvatiri kutya kurasikirwa zviri pachigadzirwa chedu: makiyi, chikwama, masutukesi ... mikana isingaperi. Kana uchivatenga muApple Chitoro, vanogona kuchinjwa nenzira ye tsika Laser achiita zvokutemera. Zvisinei, kumwe kusanganiswa kwe emoji uye mamwe mazwi akarambidzwa neApple.
AirTag laser rekutemera rakarambidzwa kune mamwe emoji uye mazwi musanganiswa
Dzorerazve yako yakanyorwa meseji. Ipa iyo yekubata pachako neako ekutanga, yako rombo nhamba kana yako yaunofarira emoji.
Vakomana nevasikana ve vava kuda ndivo vave vekutanga kupa yambiro. Iko kusarudzika kweAirTag engraving kwakarambidza kumwe kusanganiswa kwe emoji uye mazwi. Imwe yemasanganiswa iwayo ndiyo yaunoona mumufananidzo iyo musoro wechinyorwa: bhiza padhuze ne'inofara tsvina '. Nekudaro, dzimwe mhuka dzine poop imwechete emoji haina kurambidzwa. Kana mubatanidzwa unobvumidzwa haubvumidzwe nekuisa poop pamberi pabhiza.
Mimwe yemazwi akarambidzwa kutuka kana mazwi akashata anosvika mavara mana nekuti iwo ndiwo mahombe emavara anogona kuiswa mukunyora kwakasarudzika. Mamwe emashoko iwayo, semuenzaniso 'fuck' kana 'mbongoro'. Zviri pachena kuti Apple inoda laser zvinyorwa zvekushandura iyo AirTag, asi haitenderi kuiswa kwezvinhu zvinogumbura.
Nekudaro, izvi hazviitike, zvirinani kwete kusanganiswa kweye bhiza nemombe emoji, mune zvakatemwa neraser zvezvimwe zvinogadziriswa zvigadzirwa seApple Penzura. Tichaona kana kuri kukanganisa kana iyo Big Apple ichiedza kudzivirira idzi mhando dzemubatanidzwa nekuti dzinogona kugumbura, kunyangwe, pakutanga, zvinoita kunge zvisingaite.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoganhurira mamwe emojis uye mazwi mune akanyorwa zvakaenzanirana neAirTag